Nhau - Ndeipi Iyo Yekuvandudza Nhoroondo yeiyo Precision Kukanda?
Ndeipi Iyo Yekuvandudza Nhoroondo yeiyo Precision Kukanda?
Kudzora kwekukanganisa kunosanganisira kudyara kwekudyara, zvedongo chakuvhuvhu kukanda, simbi muforoma kukanda, kumanikidza kukanda uye EPC.
Investment Kudzingwa, inozivikanwawo sewa kurasikirwa kurasikirwa, inowanzo shandiswa: yakakodzera mari yekudyara kukanda zvinhu (separafini) zvinosarudzwa kuita mari yekudyara; Dzokorora nhanho dzekunyudza dzinonamira uye kupfapfaidza jecha refractory pane chakuvhuvhu choumba, kuomesa goko nekuomesa; Wobva wanyungudza iyo yemukati yekudyara muforoma kuti uwane iyo mhango; Bika chiko cheganda kuti uwane simba rakaringana uye upise zvakasara zvekudyara muforoma zvinhu ,; Midziyo yesimbi inodiwa pakudira; Solidification kutonhodza uye kuchenesa jecha mushure mekutepfenyura, kuti uwane yakakwira-chaiyo yakapera zvigadzirwa. Kurapa kwekupisa, kushanda kutonhora uye kwepamusoro kurapwa kunoitwa zvinoenderana nezvinodiwa zvechigadzirwa. Nemazvo Kudzingwa izere izwi rekuti nzira yekukanda kuti uwane zviyero chaizvo. Inofananidzwa neyechinyakare jecha kukanda maitiro, saizi yekukanda yakawanikwa nekunyatso kurasa yakanyatsoita uye nzvimbo iri nyore.
Nemazvo Kudzingwa kunonziwo wakisi yemahara kukanda. Zvigadzirwa zvaro zvinoyevedza uye zvakaomarara, padhuze nechimiro chekupedzisira chezvikamu, uye zvinogona kushandiswa zvakananga pasina kugadziriswa kana kungove shoma yekugadzirisa. Icho chiri chemberi padyo nemambure chimiro achigadzira tekinoroji. Ko nhoroondo yaro?
Munguva dzekare, Ziwu katatu, kurambidzwa kwebhuronzi uye shumba yendarira zvese zvaive hunyanzvi hwekunyungudika nekukanda. Kubva kuma1940, kukanda mari kwakashandiswa mukugadzirwa kwemaindasitiri, uye kwave kukurumidza kukura kwehafu yezana ramakore. Kunyanya kukurumidza kukurumidza kwenzvimbo dzeEuropean neAmerica. Kunze kwekubhururuka uye zvombo, kuraswa kwekudyara kunoshanda kune angangoita ese maindasitiri zvikamu, kunyanya zvemagetsi, peturu, indasitiri yemakemikari, simba, zvifambiso, indasitiri yechiedza, machira, mishonga, zvekushandisa pakurapa, mapampu nemavhavha. Mumakore apfuura, hupfumi hweChina hwakawedzera nekukurumidza.
With kukura inivhesitimendi Kudzingwa michina, mari Kudzingwa anogona kubereka kwete castings diki chete, asiwo castings hombe. Hurefu hwayo hwese hwave padhuze ne2m kukwirira, asi hushoma hwemadziro ukobvu haupfuure 2m. Panguva imwecheteyo, makambani ekudyara akanyanya kujeka. Pamusoro peiyo mitsetse shiviriro, ivo vanokwanisa zvakare kuwana yakakwira geometric shiviriro. Iyo yepamusoro roughness yekudyara castings iri kuita diki uye diki, Inogona kusvika Ra0.4 μ m.
Post nguva: Sep-26-2021